Ezona ndlela zilungileyo zokukhenkceza (kunye nokunyibilikisa) Inyama! - Iingcebiso Kunye Neengcebiso
Ezona ndlela zilungileyo zokukhenkceza (kunye nokunyibilikisa) Inyama!
Yithande? Yigxininise UKUYIGCINA!
Shiya iingcebiso zakho ezintle kwizimvo ezingezantsi!
Ukuthenga inyama ngobuninzi kuyingcamango enkulu; kulula ukukhenkceza kwaye iya kuhlala isithuba esingangonyaka kwisikhenkcisi sakho. Nantsi indlela yokunqanda ukutshiswa kwesikhenkcezisi kunye ne-iciccles yenyama ekhenkcezileyo engacacanga, ukuze ukonwabele i-steak yakho phantse kwiinyanga ezintlanu ukususela ngoku!
Akukho Moya Apho: Umoya yeyona nto imbi kwinyama engumkhenkce. Qinisekisa ukuba ususa wonke umoya kwisikhongozeli xa usiya kukhenkceza nayiphi na inyama okanye imveliso yenkukhu.Eyona ndlela ingcono yokususa umoya kukufunxa wonke umoya ngaphandle kokupakisha ngomququ phambi kokuwuvala ngokuqinileyo. Ukuba ukhenkceza inyama rhoqo, unokuthanda ukucinga ngokutyala imali kwi vacuum sealer (Eli lixabiso elikhulu) . Ngotyalo-mali oluncinci lokuqala, lunokukongela iitoni zemali ngokuthenga okuninzi kwaye ungalahli ukutya okonakalisiweyo. IAmazon ineentengiso ezintle kwi Vacuum Sealers .
Yisonge ekunene: Iibhegi ze-Ziplock zilungile ukuba zikhenkce, nangona kunjalo, enye inketho enkulu kukugubungela ukutya okutsha kwi-frozen kwiphepha lenyama, njengokuba ufumana kwi-butcher. Emva kokuyigubungela ngokucophelela ephepheni, uze uyifake kwisikhwama seplastiki esingenamoya kunye nesitywina.
Iileyibhile, iileyibhile, iileyibhile: Eyona nxalenye imbi yokugrumba kwisikhenkcisi esizele kukutya kuzama ukufumanisa ukuba ujonge ntoni. Bhala iibhegi zakho ngeziphawuli ezisisigxina okanye uzisebenzise iilebhile zesikhenkcisi kwizikhongozeli zakho , kunye nemixholo kunye nomhla oyikhenkcezileyo. Oku kuya kukwazisa ukuba yintoni esondela kumhla wokuphelelwa kwayo, kwaye yenze ulungiselelo lwesikhenkcisi lube lula ekuhambeni kwexesha!
Yazi inyama yakho: Uhlobo ngalunye lwemveliso yenyama lunobomi beshelufa ethile kwisikhenkcisi. Qiniseka ukuba uyazi okuninzi malunga nemveliso oyigcinayo njengoko unako. Njengomthetho, inyama echetyiweyo kunye nechetyiweyo ingahlala kuphela kwisikhenkcisi malunga neeveki ezimbini. Inyama ephantsi, ephilisiwe kwaye ephekwe ngaphambili ingahlala malunga neenyanga ezi-2-3. Amaqhekeza amakhulu enyama angasikwanga alungile kangangeenyanga ezili-12 kwisikhenkcisi.
Yigcine iKhanyile: Isikhenkcisi esigcwele kakhulu sisikhenkcisi esingonwabanga. Ukutya okuseziko akuyi kuba ngumkhenkce ngokufanelekileyo kwaye kunokungakhuselekanga ukukutya. Izinto ezijikeleze imiphetho yesikhenkcisi zinokutshiswa kukutsha kwesikhenkcisi. Ukuba uneemfuno ezininzi zokugcina isikhenkcisi, unokufuna ukucinga ngokuthengela isibini isikhenkcisi kumgangatho ongaphantsi okanye igaraji.
Nyibilika kwifriji: Nangona amanye amakhaya enyibilikisa inyama kwikhawuntara kakuhle, isenokubangela umonakalo kwizisu zeendwendwe ezingayinyibilikisi inyama kwindawo yobushushu begumbi. Qinisekisa ukuba uyishiya inyama yakho isongelwe, kwaye uyibeke efrijini iiyure ezininzi phambi kwexesha lokupheka. Iimveliso zenyama zifuna malunga neyure enye yexesha lokunyibilika ngeponti nganye.
Thaw Ngokwendalo: Ukuba ulibele ukukhupha inyama yakho kwisikhenkcisi kwaye kufuneka uyinyibilikise ngokukhawuleza, ungayifaki kwi-microwave! Ukusetwa kwenyibiliko kwii-microwaves kungonakalisa incasa yenyama yakho egcinwe ngononophelo. Endaweni yoko, faka isikhwama esitywiniweyo kwisitya esigcwele amanzi abandayo kwaye uvumele ukuba udibanise ixesha elide njengoko unako. Qiniseka ukuba utshintshela emanzini uwagcine ebanda ukugcina inyama yakho ikhuselekile!
Ndwendwela i Iziko leSizwe loLondolozo lokutya kweKhaya ngeyona ndlela yokukhenkceza isikhokelo!
Ukupheka Iiherbs Guitar Izixhobo Iivithamini In Food Ngaphakathi Design Basics Ukutya Kwaselwandle
lithetha ntoni inani u-4 kwinombolo
ungasusa njani amabala kumgangatho weplanga
ukuqala njani ngenkonzo eshushu yokudubula
I-tracker yaseMelika ehamba ngenqwelomoya ngexesha lokwenyani
benze muphi unyaka ngeepeni zentsimbi
xa indoda episces isithi iyakuthanda